VOA Afaan Oromoo, 330 Independent Ave., Washington, DC (2020)
Broadcasting to the Horn of Africa region since July 1996.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa Sagantaan Afaan Ormoo saba Itiyoophiyaa keessatti isa tokkicha guddaa tahe kan uummata biyyattii keessaa dhibba gara harka afurtamaa tahuu fi walakkeessaa fi Kibba biyyattii keessa jiraatutti xiyyeeffatee tamsaasama. Afaan Oromoo lammiwwan Oromoo Keeniyaa gama Kaabaa fi godaantota Oromoo Sudaan, Jabuutii, Giddu-galeessa Bahaa fi biyyoota Addunyaa kaan keessa jiraataniinis ni dubbatama.
Mission: Promoting dialogue and democracy
Oromiyaa Bakkawwan Adda Addaatti Tarkaanfiin Hidhaa Mootummaan Fudhataa Jiru Dhiibbaa Hamaa Uumuu Isaa tu Dubbatama
Humnoota naga-eegumsaa mootummaan baatii tokko dura hidhamanii tibbana gadi lakkifamuu ka dubbatan bakka-bu’aan Paartii Kongirasii Federaalawa Oromoo/ KFO obbo Fiqaaduu Ayyaanaa, rakkoo hidhaan isaaniifi maatii isaanii akkasumas hojii isaanii irratti uume, jedhan VOAf ibsanii jiran.
Humnoota naga-eegumsaa mootummaan baatii tokko dura hidhamanii tibbana gadi lakkifamuu ka dubbatan bakka-bu’aan Paartii Kongirasii Federaalawa Oromoo/ KFO obbo Fiqaaduu Ayyaanaa, rakkoo hidhaan isaan
Guyyaan Baqattoota Addunyaa 19ffaan Gaadidduu Vaayirasii Koronaa Keessatti Mudde 20 Ayyaaneffama
Sanbata dhufu jechuun Waxabajjii 20, bara 2020 Guyyaa Baqattootaa waggaa 19ffaa tu guutummaa addunyaatti ayyaaneffama. Ayyaana waggaatti takkaa kabajamu kana irratti deggersa maallaqaa gargaarsa baqat
Prezidant Doonaald Traamp Ajaja Sadarkaa Ol Aanaa Dabarsan
Manni nyaataa Atlaantaa Joorjaa keessa jiru kun torban bakka namni gurraacha ta’e Rayshard Brooks poolisii adiitiin itti dhukaafamuun ajjeefame. Manni nyaataa kunis hiriirtota mormiin gubate. Prezi
Qophii Roobii. #VOAAfaanOromoo
Waa'ee Vaayirasii Koronaa Hubannoo Uumuuf Qooda Artistoonni Oromoo Gumaachan
Giddu-galli Aadaa Oromoo, ka magaalaa Finfinnee jiru artistoota ogummaa isaaniitti fayyadamuun karaa weelluu, diraamaa fi taphoota adda addaa uummata barsiisuuf carraaqaa jiran kana tumsuudhaan jajjabessaa akka jiru dubbata.
Namoonni ogummaa artiitti bobba’anii jiran weerara Vaayirasii Koronaa ilaalchisee hubannoo hawaasaa cimsuuf karaa ogummaa isaaniitiin hojii geggaarii hojjetaa jiru. Giddu-galli Aadaa Oromoo, ka m
Daarekter VOA Amandaa Bennetii fi itti aantuun isii 'hujii jabduutti jirtani jabaadhaa jedhanii nagaa dhaamattee itti gaafatama irraa bu'an
VOA Afaan Oromoo waliin afaan 47n oduu addunyaatti himti. VOA ganna 78n dura hujii jalqabde. Mootummaa Amerikaatti horiin gargaara. VOAn USAGM(US Agency of Global Media) jalatti bulti. USAGM jala Radio Free Europe/Radio Liberty,Radio Free Asia fi Cuba Broadcasting jala jira.VOAn torbaanitti nama miliyoona 280 caqasa.Amanda Bennet ganna afur VOA bulchite pirezidaanti Obaamaatti bara 2016 keessa hujii tanatti filate. Pirezidaanti Tiraampi VOAn poropogaandaa Chaayinaa afarsiti jedhee hiamtee VOAn ammoo hin mormatte. Bulchiinsii Tiraampi bulchiinsa USGM-f nama haaraa Michael Pack filate. https://bit.ly/30QG5uC #VOA #USGM #AfaanOromoo
Amandaan bulchiinsa pirezidaantiitti filate ganna afur VOA bulchaa baate.Isii fi itti aantuun isii Sandii Sugawara kalee hujii bu’uu isaanii hojjattootatti himanii VOA poropogaandaa Chaayinaa oofteetu
Akka Caban Okkolan Jennee Dhiifne. Eebba Baranaa Abbuma tu Akka Ixaanaatti Mana Ofiitti Aarfate: Jecha Barataa Yunivarsitii Irraa Eebbifame
Yunaaytid Isteetes keessatti faca'iina Vaayirasii Koronaa ittisuuf jecha tarkaanfilee fudhataman keessaa tokko manneen barumsaa cufanii akka barattonni sadarkaa adda addaa mana ofii keessaa karaa mar
Zooniin Walaayittaa Murtii Gumii Naannoo Keessaa Ba’uuf Murteesse Nan Cimsa Jedhe
Zooniin Walaayitaa bakka buutota isaa gumii naannoo uummattoota kibbaa keessaa baasuuf murteessuu isaa beeksise.
Zooniin Walaayitaa bakka buutota isaa gumii naannoo uummattoota kibbaa keessaa baasuuf murteessuu isaa beeksise. Murtiin kunis zooniin walaayitaa naannoo ta’uun akka isheen hundeeffamne sagalee uk
Gamtaan Awrooppaa Tattaaffii Itiyoopiyaan COVID-19 Ittisuuf Gootu Deggeruuf Euro Miliyoona 487 Kan Gumaache Ta’uu Ibse
Gamtaan Awrooppaa Tattaaffii Itiyoopiyaan COVID-19 Ittisuuf Gootu Deggeruuf Euro Miliyoona 487 Kan Gumaache Ta’uu Ib
Gamtaan Awroppaa fi biyyooni miseensota ta’an tattaaffii Itiyoophiyaan COVID -19tti duuluuf gootu deggeruuf jecha qarshii biliyoona 19 kan gumaachu ta’uu Finfinneetti kan argamu gurmuun gamtichaa beek
Balaan Lolaa Uummata Naannoo Somaalee Keessaa Rakkinaaf Saaxile
Naannoo Somaalee keessatti baatii tokko duraa qabee balaa lolaa uumameen uummanni utuu irraa hin dandammatin baatiin roobaa waan jalaqabameef jecha yaaddoo ka biroo itti uumuu isaa mootummaan naannoo Somaalee ibsee jira.
Naannoo Somaalee keessatti baatii tokko duraa qabee balaa lolaa uumameen uummanni utuu irraa hin dandammatin baatiin roobaa waan jalaqabameef jecha yaaddoo ka biroo itti uumuu isaa mootummaan naannoo
Paartii Haaraan Bilisummaa Tigraayiif Qabsaa’u Hundeeffame
Tigraay keessatti Paartiin Tigraayiin biyya akka taatuuf karaa nagana qabsaa’u hundeeffamuun gabaasame.
Tigraay keessatti Paartiin Tigraayiin biyya akka taatuuf karaa nagana qabsaa’u hundeeffamuun gabaasame. Paartii bilisummaa Tigraay jedhamee kan waamamu paartiin kun sambataa fi dilbata darbe gumii h
Gumiin Hoogganoota Amantii Gara Maqaleetti Imalan
Gumiin hoogganoota amantii fi jaarsoliin biyyaa kanneen koree araaraa gurmuu nageenyaaf jecha yeroo ammaa Meqelee seenanii jiran.
Akka gabaasaaleen tuqanitti jilli kun kan gamasitti imaleef adda addummaa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduu jiru walitti fiduuf jecha.
Gumiin hoogganoota amantii fi jaarsoliin biyyaa kanneen koree araaraa gurmuu nageenyaaf jecha yeroo ammaa Meqelee seenanii jiran. Akka gabaasaaleen tuqanitti jilli kun kan gamasitti imaleef adda add
Sanyii Fooyyeffamee Dhiyaate (GMO) Laalchisee Deebii Angawaa Mootummaa Itoophiyaa
Sanyiin fooyyeffamee Dhiyaate kan GMO jedhamu biyya akka Itiyoophiyaa seenee keessumaa qonnaan bulaa bira yoo ga’e miidhaa inni qabaachuu malu ilaalchisuu dhaanis mootmmaa biraa deebii argannee jirra. Itti aanaa itti gaafatamaan institiyuutii qonnaa federaalaa Dr. Taaddesee Dhaabaa deebii nuu kennanii jiru. GMO ykn sanyiin fooyyeffame kun yoom biyya akka seene ibsuu dhaan jalqabu.
Mormii Sanbata Dabre Dinshoo, Baalee Keessatti Ka’een Daandiin Guddaan Cufamee Namoonnillee Miidhaman Jedhama
Sirna awaalchaa nama qaamolee mootummaa harkatti lubbun isaa darbe jedhamee ka Saadiq Haaji Ibiroo irratti Sanbata dabre kana mormii ka’een daandiin guddichi Baalee Roobee irra gama Shaashamnee fi Adaamaa geessu Diinshoo irrati cufamee turuu isaa ibsame.
Sirna awaalchaa nama qaamolee mootummaa harkatti lubbun isaa darbe jedhamee ka Saadiq Haaji Ibiroo irratti Sanbata dabre kana mormii ka’een daandiin guddichi Baalee Roobee irra gama Shaashamnee fi Ada
Sagantaan Kenninsa Tajaajila Lammummaa Marsaa 2ffaan Waliisootti Eegalame
Muummeen ministiraa Itoophiyaa Dooktor Abiyyi Ahimad sagantaa kenninsa tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa marsaa 2ffaa magaalaa Walisootti eegalanii jiran.
Muummeen ministiraa Itoophiyaa Dooktor Abiyyi Ahimad sagantaa kenninsa tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa marsaa 2ffaa magaalaa Walisootti eegalanii jiran. Sagantaan Kenninsa Tajaajila Lammummaa
Qophii Wiixataa. #VOAAfaanOromoo
Hiriirri Mormii Yunaaytid Isteetes Keessaa Har'as Itti Fuufa Jedhame
Yunaaytid Isteetes Atlaantaa keessatti Jimaata darbee namnii Rayshard Brooks jedhamuu harka polisiitti du'uun gabaafamee jira. Jorjiyaa keessatti mormiitonni Wiixata har'a galgala mana maree kutaa dur
Ertraa Keessatti Lakkoobsi Namoota Koviid-19 Qabaman Dabalee Jira
Kutaa Gaash Baark keessa kan jiru waaltaalee namoota adda baasanii ka'an lama keessatti namoonni 55 haaraa vaayrasii koronaan qabamuun gabaafamee jira.
Kutaa Gaash Baark keessa kan jiru waaltaalee namoota adda baasanii ka'an lama keessatti namoonni 55 haaraa vaayrasii koronaan qabamuun gabaafamee jira. Kunis Sambataa fi Dilbata darbee kana qorannaa
Vaayrasii Koronaa To'achuuf Naannoo Daangaatti Maaltu Hojjatamaa Jira?
Faca'iina dhukkuba Koviid-19 ittisuuf jecha naannoo daangaa Itiyoophiyaatti waaltaalee namoota adda baasanii keessa ka'an mootummaan dabalataan kan qopheessuu ta'u Ministeerri eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa hojjataa akka jiru ibsamee jira.
Faca'iina dhukkuba Koviid-19 ittisuuf jecha naannoo daangaa Itiyoophiyaatti waaltaalee namoota adda baasanii keessa ka'an mootummaan dabalataan kan qopheessuu ta'u Ministeerri eegumsa fayyaa Itiyoophi
“Obboleessi Koo Miseensa ABO Waan Ta’eef Abbaa Fi Haadha Koo Ajjeesan”: Sintee Asshaagire
Maatiin kun, Waxabajjii 5 bara 2020 galgala mana isaanii keessaa gad waamamanii itti dhukaafamuun ajjeefaman.
Obbo Ashaagreen qonnaan bulaa cimaa akka turan maatii fi kanneen isaan beekan kan dubbatan. Jimaata Waxabajjii 5 bara 2020 galgala mana isaanii keessaa gad waamamanii itti dhukaafamuun ajjeefaman.
Magaalaalee Oromiyaa Lixaa Adda Addaa Keessaa Namoonni Hedduun Hidhamuu Dubbatu Maatii fi Jiraattonni
Abbaan Warraa koo waan ilaalcha siyaasaa isaan hidhameef, ijoollee keenya jiraachisuun natti ulfaateera” jedhan, jiraattuun magaalaa Naqamtee Aadde Fireezar Massala.
Abbaan Warraa koo waan ilaalcha siyaasaa isaan hidhameef, ijoollee keenya jiraachisuun natti ulfaateera” jedhan, jiraattuun magaalaa Naqamtee Aadde Fireezar Massala. “Abbaan Warraakoo kanaan duras
Maamiltoonni keenya karaa Feesbuukii nu hordoftan, harra sa'aatii dabarsinee dhufuu keenyaaf nu oofkalchaa. Qophiin Jimaataa kinooti. #VOAAfaanOromoo
Ajjeechaa Dinshootti Raaw’atamee Tureef Poolisoota Lama Dabalee Shakkamtoonni 12 Qabaman
Yakka Ajeechaa godina Baalee Aanaa Diinshootti raaw’atamee tureen wal qabatee namoota 12 tohannaa jala olchuu isaa bulchiinisi Godina Baalee beeksisee jira.
Yakka Ajeechaa godina Baalee Aanaa Diinshootti raaw’atamee tureen wal qabatee namoota 12 tohannaa jala olchuu isaa bulchiinisi Godina Baalee beeksisee jira. Namooni yakka ajjeechaa Obbo Saadiq Haaj
Itiyoophiyaatti Lakkoobsi Namoota COVID 19n Qabamanii Dachaan Dabalaa Jira
Weerarri Vaayirasii Koronaa eega Itiyoophiyaa keessatti mul’atee guyyoota 90 lakkoofsiseera.
Kessumaammoo torban afurii asitti baay'inni namoota vaayirasii kanaan qabamanii dachaan dabalaa akka jiru tu ibsame.
Weerarri Vaayirasii Koronaa eega Itiyoophiyaa keessatti mul’atee guyyoota 90 lakkoofsiseera. Kessumaammoo torban afurii asitti baay'inni namoota vaayirasii kanaan qabamanii dachaan dabalaa akka jir
Booranatti nama 200 oliitti hidhaa jiraa Abbaan Gadaa Eegerii, Raabaa-Dooriin Booranaa Jaldeessa Guyyoos hidhamee bahe: Jiraattota
Booranaa aanaalee gammoojii fi daangaa irraa jiran keessaa humnoon mootummaa maqaa nagaa kabachiisuu namoota baayee hidhaa jiruu jedhu jiraattonni.
Jiraattonnii akka jedhanitti Oromiyaa Kibbaa Booranaa aanaalee gammoojii fi daangaa irraa jiran keessaa humnoon mootummaa maqaa nagaa kabachiisuu namoota baayee hidhaa jiruu jedhu jiraattonni.
ABO fi KFOn Murtii Mana-maree Federeeshinii Mormuun Ibsa Baasan
“Murtiin Manni-maree Federeeshinii yeroo bulchiisaa mootummaa dheeressuuf dabarse, gochaa seeraa alaa ti,” jedha ibsi paartiileen mormitootaa lamaan waliin baasan.
Addi Bilisummaa Oromoo fi Koongiresiin Federaalawa Oromoo Manni-maree Federeeshinii Itiyoophiyaa haga filannoon waliigalaa geggeessamutti mootummaa taayitaa irra jiruuf akka yeroon aangoo dheeressamuu
Mormiin Sochii Mirga Namaa Hawaasaalee Ameerikaa Hanga Tokko Keessatti Jijjiirama Murtii Haqa Hawaasaa Gaarii Argamsiisaa Jira
Hojettuu dhimma hawaasummaa kan ta’an Joyce Jonson dilbata darbe siidaa hoogganaa sochiii mirga namaa Washington, D.C keessa jiru fuulleetti hiriira mormii geggeessame argamanii jiran. Richmond,VA
Prezidaant Traamp Dhimmootii Hiriirtonni Mormii Dhiyeessan Ilaalchisee Tarkaanfii Fudhachuuf Itti Yaadaa Jiran
Prezidaant Doonaald Traamp har’a Dalaas keessatti hoogganoota amantii angawoota seera eegsisanii fi abboota qabeenyaa daldalaawwan xixiqqoo waliin wal arguuf jiru.
Prezidaant Doonaald Traamp har’a Dalaas keessatti hoogganoota amantii angawoota seera eegsisanii fi abboota qabeenyaa daldalaawwan xixiqqoo waliin wal arguuf jiru. Du’uu Joorj Filooyiidiin wal qabatee
Yunaayitid Isteetis Keessaa Lakkoobsi Namoota COVID-19n Qambamanii Miliyoona Lamaa Ol Ta’e
Yunaayitid Isteetis keessaa lakkoobsi namoota vaayiresii koronaan qabamanii miliyoona lamaa ol ta’uun beekamee jira.
Yunaayitid Isteetis keessaa lakkoobsi namoota vaayiresii koronaan qabamanii miliyoona lamaa ol ta’uun beekamee jira. Marsariitii waaltaa qorannaa Yuniversitii Joons Hoookins irratti akka maxxanfamet
Siidaan Giiftii Viktooriyaa Waggoota Shan Dura Bakka Turee Kaafamuun Keeniyaa Keessatti Gammachuu Haaraa Uume
Kan sirna koloneefattummaa Briteen yaadachiisu siidaan giivitii Viktooriyaa keenyiyaa keessaa kaafamuun waggoota hanga tokko booda gammachuun simatamaa jira.
Kan sirna koloneefattummaa Briteen yaadachiisu siidaan giivitii Viktooriyaa keenyiyaa keessaa kaafamuun waggoota hanga tokko booda gammachuun simatamaa jira. Bara 1963 Keeniyaan bittaa Briteen jalaa
Prezidaant Doonaald Traamp Prezidaantii Masrii Waliin Mari’atan
Prezidaant Doonaald Traamp Roobii kaleessa prezidaantii Masrii Abdel Fettaah El-Sisii waliin dubbatanii jiru. Prezidaant Traamp El Sisiin xumura turban darbee araarri akka bu’uu fi walitti bu’iinsi Liibiyaa keessaaa akka dhaabatu tattaaffii isaan godhan galateeffataniiru.
Prezidaant Doonaald Traamp har’a prezidaantii Masrii Abdel Fettaah El-Sisii waliin dubbatanii jiru. Prezidaant Traamp El Sisiin xumura turban darbee araarri akka bu’uu fi walitti bu’iinsi Liibiyaa kee
Sanyiin Fooyyeffamee Dhiyaate (GMO) Itiyoophiyaa Keessatti Babal'achuu Dura Itti Yaadamuu Qaba: Hayyuu Saayinsii Uumamaa
Sanyiin fooyyeffame kan GMO jedhamu biyyootii guddatan keessatti beekamu iyyuu biyyoota kan akka Itiyoophiyaa keessatti beekamaa miti.
Qorannaaleen hangi tokko akka mul’isanitti midhaan nyaataafis oolu ka biroon sanyii kana irraa oomishamu fayyummaa namaa qulqullina biyyoo fi qilleensa naannoo irratti dhiibbaa qabaata jedhu.
Hayyuu Saayinsii Uumamaa kan ta'aan fi biyya Noorweetti barumsa PhD barachaa kan jiran Obboo Teshome Hunduma dubbisneerra.
Marii Kutaa 1ffaa: https://www.voaafaanoromoo.com/a/5458749.html
Marii Kutaa 2ffaa: https://www.voaafaanoromoo.com/a/5458751.html
Sanyiin fooyyeffame kan GMO jedhamu biyyootii guddatan keessatti beekamu iyyuu biyyoota kan akka Itiyoophiyaa keessatti beekamaa miti. Qorannaaleen hangi tokko akka mul’isanitti midhaan nyaataafis
330 Independent Ave.
(202) 205-9942 Ext 13
Be the first to know and let us send you an email when VOA Afaan Oromoo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Send a message to VOA Afaan Oromoo:
Dargaggoo COVID-19 Irraa Fayye
SAT 2020 ,Agarsiisa Saatelayitii Addunyaa,DC
Joorji Filooyidiif Haqa Barbaaduu
Hiriirtonni Joorj Filooyidiif Murtii Haqaa Barbaadan Gaaffiin Isaanii Hookkaraan Oofamuun Haguugame
Konkolaataa Mormitootatti Ooffame
Dilbata darbe konkolaatan fe’iisaa semiitireeler jedhamu Minisootaa magaala Minniyaapolisitti namoota hiriira bahanitti oofame. Oggasuma mormiitoonni itti duubanii konkolaatichi akka irraa dhaabbatu godhan. Minniyaapolis dabalatee magaalota Yunaytid Isteets baayyee keessatti mormiin godhamu itti fufeera.
Finfinnee: Vaayrasii Koronaa
Lakkoofsi namoota magaala Finfinnee keessatti vaayrasii koronaatin qabamanii dablaaa jiraatus ammallee hawaasni og-eeggannoo gahaa godhaa waan jiru hin fakkaatu. Tsahaay Daamxoo kutaa magaalattii amma tokko sin daawwachiisti, itti dhihaadhaa. #COVID19Ethiopia #Finfinnee
Mormii Duuti Joorji Flooyid Kaasise
▶️Mormiin Minisootaa Magaala Minniyaapoolisitti Geggeeffamu Itti Fufeera Minniyaapolis keessatti lammiin Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa ta’e Joorji Flooyid to’annaa poolisii jala odoo jiruu lubbuun isaa dabarte. 👉Maaltu ta’e? Viidiyoon waraabbame akka agarsiisutti erga Joorji to’annaa jala oolee booda poolisiin adiin jilba isaan morma Joorji irra ejjete Joorji “I can’t breathe” jechuuniis “Afuura baafachuu dadhabe” jedhus poolisichi miila irraa in kaafanne. Booda Joorji dubbii dadhabe. Baatanii ambulaanisii korsiisan. Buufata fayyaa gahee yeroo muraasa keessatti lubbuun isaa darbuu poolisiin magalitti ifa godhe. Oduun kun dhagahamee battaluma jiraattoonni magaalittii baayyeen mormiidhaa karaatti bahan. Hiriirri Hojjaa-duraa jalqabe amma Roobii kaleessatti itti fufe. Poolisoonnii yeroo manneen gubatan irraa abidda dhaamsan mullteera. Suuqiiwwaan naannoo san jiran keessaa meeshaan hatamuunis gabaafamaa jira.
Wirtuu Waldhaansa COVID-19
▶️ Wirtuu Waldhaansa COVID-19 👉Motummaan Itiyoophiyaa waldhaansa Vaayrasii Koronaatiif akka oolu, Galma guddicha biyyatti Bar-Kumeen Moggafame gama wirtuu yaala COVID 19 jijjiiruun wanto barbaachisan hunda gutaafi akka jiru Ministeerii Fayyaa beeksise. Wirtuun waldhaansa COVID 19 kun namoota kuma tokko fi dhibba tokko ol (1,100) akka simatuuf sireefi meshaaleen deegarsaa gutamuufiin ibsamee jira. Muktar Jemal Gabaasa Viidiyoo qaba.
Ambulaansii COVID-19 Biiniyaam Asraati fi maatin isaa ambulaansii nama tokko fetuu meeshaa moofaa gaggatame irraa hojjatan tana magaala Hawaasatti hojii jalqabsiisaniiru. Ambulaansiin doqdooqee irratti maxxante tajaajila kennitu tun, yeroo barbaachisetti irraa hiikkamtee, qulqulleeffamtee deeb’uu akka dandeechutti hojjatamuu ishii dubbatan. "Dura haadhota ciniinsun qabeef yaadnee hojjanus, amma garuu weerara COVID-19 ittisuuf qophii godhamaa jiruuf akka ooltu goone," jedhan.
Oduu Afrikaa Daqiiqaa Tokkoo
Waldaa “Furtuu Waraana Dhokataa Covid-19”
Waldaa “Furtuu Waraana Dhokataa Covid-19” jedhama. Magaalaa Amboo Ganda Yaa’ii Gadaa bakka ‘Gool Piroojektii’ jedhamutti argama. Miseensota 16 qaba. Erga Koroonaan Itoophiyaatti mullatee guyyaa tokkoofillee osoo addaan hin kutin hawaasa magaalaafi baadiyyaa Amboo harka dhiqsiisuurratti argama. Gabaasa Naakoor Malkaa daawwadhaa.
Hubannaan Ummataa Maal Irra Jira?
Vaayirasiin Koroonaa COVID 19 akka Itiyoophiyaa keessatti muldhateen rifaatuun guddan uumamee of-eeggannoon harka dhiqachuu fi qaamaan wal irra fagaachuu raawwatamaa ture, amma hoo hubannaan ummataa maal irra jira? Hojiileen tamsa'ina Vaayrasichaa ittisuu maal fakaata? Gabaasaan VOA Muktaar Jemaal Magaalota Oromiyaa Adaama hanga Shaashamanee jiran dawwatee jira.
Walaaloo Waayee Haadhaa, Lataa Qana'iitin
Aayyoo, Harmee, Immaa, Haadha, Dahee, Deessee yokaan Ummaa jennee kamiinuu waamnu, namni hundi waa’ee haadha ofii waan gaarii himee in fixatu. Qophii Guyyaa Haadhotaa laalchise bara 2017 dhiheesine irratti walaloo Lataa Qanan'ii dhiheesse kana irra deebiin sin affeerra. #MothersDay2020
Maatii Vaayrasii Koronaa Irraa Damdamate
Vaayrasii Koronaa "Maatii kiyya keessaa namni lama qabamnee, namni lama bilisa taane” Obboo Ittafaa Namumaa jiraataa Waashingitan Diisiiti. Ji’a Eblaa darbe keessa vaayrasii koronaatin qabamee torban lamaa booda fayye. Ilmi isaa oggaa 3 garuu, vaayrasichi qaama isaa keessa jiraachuun qorannoodhan mirkanahuus mallattoon dhukkubicha irratti in mullanne. Haatii warraa Obboo Ittafaa, Aaddee Aannanee Qaabataa fi intalli isaanii immoo COVID-19 irraa walaba ta’uun qorannoodhan mirkanaahuu natti himan. Muuxannoo isaanii marii Dilbata darbe geggeeffame kana irratti ibsaniiru. Laalaa.
Ergaa daarektarriin Sagalee Ameerikaa (VOA)
Ergaa daayrektariin Sagalee Ameerikaa (VOA), Amaandaa Beneet, guyyaa Walabummaa Preesii Adduyaa laalchisuun dabarsan. "Weerarri vaayrasii koronaa taateewwan hedduu barbaachisummaa presii walabaa addeessan keessaa tokko."
"Weerarri COVID-19 Sodaachisaa Ta'us Hoodachuu Wayya"
"Weerarri COVID-19 Sodaachisaa Ta'us Hoodachuu Wayya," Obboo Dagnachew Bayou
Yaalii Talaallii Haaraa
Yaalii Talaallii Haaraa 🇬🇧 Biriteen keessatti talaalliin yaalii an vaayrasii koronaa namoota lamaa kenname. Gareen talaallii kana ji’a sadii keessatti qopheesse yunvarsiitii Oksfoordi irraa yeroo ta’u, itti aansuudhaanis namoota fedhii ofiitin hirmaachuu barbaadan dhibbaan lakkaawwamaniif talaallichi kennamuuf qophiin xumuramuun himameera. Awrooppaa keessattii talaalli yaalii kana kennuudhan Biriteen an duraa taatetti. #COVID19
“Yeroo dhibamaa fayyee bahu arge boris gammacbuun hojiitti deebi’a”
“Yeroo dhibamaa fayyee bahu arge boris gammacbuun hojiitti deebi’a” Ogeettii fayyaa, Salaam Baqqalaa Nagarii
Harki Naamf Hiixatu Harka Duwwaa Hin Deebi’u: Weellisaa Habtaamuu Lamuu
Biyya Canada, Edmonton keessa kan jiraatu lammii Oromoo abbaa qabeenyaa mana nyaataa fi weellisaa Habtamu Lamuu Adolessa bara 2019 qabee harka qalleeyyii fi namoota daandii irra jiraatan jalqaba ji’iaa yeroo mara nyaachisuu isaa dubbata. Ofii koof rakkoo keessa waanan darbeef dabaree koo waan qabuun nama gargaaruutu boqonnaa naa kenna jedha Wellisaa Habtaamuun. Yeroo vaayiresiin koronaa hammaatee namni harka wal qabuu sodaatu kanatti illee namoota hiyyeeyyii ta’an kanaaf nyaata raabsuuf bakkuma isaan jiran dhaqee nyaachisuu kan itti fufuu ta’uu isaaf gara fuula duraattis addaan kan hin kunne ta’uu nuuf ibseera Habataamuun.
Yeroo weerara vaayrasii koronaa kana namni hawaasa keessan keessatti hooggansa cimaa agarsiisa jiru eenyu? VOA-n sinirraa dhagahuu barbaada.
Yeroo weerara vaayrasii koronaa kana namni hawaasa keessan keessatti hooggansa cimaa agarsiisa jiru eenyu? VOA-n sinirraa dhagahuu barbaada. #Voaleaders
"Akka Iyyasuus Kiristoositti Fannifamuu"
Akka Iyyasuus Kiristoositti Fannifamuu Artiistin biyya Filipiinoo kun yeroo 33ffaaf bara darbe (bara 2019) gaafa Guyyaa Fannoo, ‘Good Friday' jedhamuun beekamu akka Iyyasuus Kiristoositti fannifamuu fakkeesse. Ruben Enaje amantaa Katoolikii hordofa. Ogguma oggaadhanuu fannifamuu Iyyesuus Kiristoosii yaadachuuf bakka tuuristoonnii fi jiraattonni naannoo argamanitti bakka Saan Peedro Katwud jedhamutti fanifama. Taatonnii kaan immoo mismaarii iinchii 4 dheeratu akka waan harkaa fi miila isaatti rukkutanii fakkeessan. (Rooyters)
Artistoonni Oromiyaa Faca’ina Vaayirasii Koronaa Ittisuuf Sagantaalee Hubannoo Uumuu Geggeessaa jiran
Artistoonni Oromiyaa Faca’ina Vaayirasii Koronaa Ittisuuf Sagantaalee Hubannoo Uumuu Geggeessaa jiran https://www.voaafaanoromoo.com/a/5375238.html
Hojjattoota Guyyaa Rakkoo Keessa Jiran - Indiyaa
▶️ Poolisoonni Indiyaa godaantota gara gandoota irraa dhufaniitti deebi’uuf tajaajila geejibaa gaafatan uleedhan ari’an. Biyyittin weerara vaayrasii koronaa ittisuf amma Caamsaa 3 ti guutummatti cufamuu ishiitin namoonni hojii guyyaa hojjatanii jiraatan rakkachaa waan jiraniif ganda irraa dhufan Mumbayitti deebi’uu barbadan.
Marii Ogeessoota Fayyaa Afrikaa
Gorsituun addaa Ministira Fayyaa Itoophiyaa, Dr. Tsiyoon Firew marii ogeessonni fayyaa Afrikaa haala #COVID19 irrattii geggeessan irratti waan jedhan keessaa. #VOACoronavirusAfrica Guutummaa marii geggeefame:https://www.facebook.com/VOAStraightTalkAfrica/videos/2631750797037413/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCACmrtYtNce3guPBFLTHLveC8IdmWx1Mf7fh1HCbG33vo54WU5wi3k0SY4tfAcmCYh5p8LCXb8C8SM
Bakka Awwaalaa, Neew Yoork
Magaala Neew Yoork keessatti lakkoofsi namoota vaayrasii koronaatiin du’anii akka malee dabalaa waan dhufeef bulchitoonni yeroo silaa maatiin reeffaa iyyafatamee du’a abbaa sanii dhagahuu kennamu xinneessudhan, awwaalli dafee akka geggeeffamu murteessan. Qajeelfama amma baheen reefii guyyoota 14 qofaaf mana reeffaa tursiifama. Ammasitti firri argamuu baannan bakka bulchiinsi maagaala qopheesse ‘potter’s filed” jedhamutti awwalama. (AP)
Mallattoo Uggurri Manaa Hin Bahiinaa Kaafamuu
▶️ Magaalli Wuhaan Afuura Baafatte. Ibsaan Roobii galgala Chaayinaa magaala Wuhaantti gadhiifame uggurri manaa akka hin banee kahaamee ture raawwachuu agarsiisuf qophaahe. Uggurri manaa hin bahinaa weerara vaayrasii koronaa ittisuf Wuhaanitti jalqabamee biyyoota baayyee keessatti akka modeeliitti tajaajila jira. Magalalii jiraattota miliyoona 11 qabdu, Whuaan bakka vaayrasiin koronaa yeroo duraatii keessatti mullate. #voasocial
Temesgen Fiqaaduu , Dargaggoo Meeshaa Tuttuqqaa Harkaatiin Ala Harka Ittin Dhiqatan Uume
Temesgen Fiqaaduu , Dargaggoo Meeshaa Tuttuqqaa Harkaatiin Ala Harka Ittin Dhiqatan Uume https://www.voaafaanoromoo.com/a/5362267.html "Meeshaa harka ittiin dhiqatan kana hojjechuuf kan na kakaase ennaa vaayiresiin Koronaa hammaataa adeemetti uummati of eeggachuu akka qabu waan natti dhaga'ameef, akka lammii tokkkootti anis qooda gama koon ba'a kan jedhu natti dhaga'amnaani."
Odeeffannoo Dhugaa, Madaalaawaa, fi Hunda Hirmaachise
VOA1 The Hits
VOA Congo Story
Free Mind Free World
VOA Weekly Music
330 Independence Ave SW, Washington
330 Independence Ave SE, Ste 2600
VOA American Café
Other Broadcasting & media production in Washington D.C.
American Conservative Nation News
1307 44th Place SE
2550 17th St NW
The Minor Productions: Digital • Video • Medi